2 Samuel 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
16 Mgbe Devid gafetụrụ elu elu ugwu ahụ,+ Zaịba+ onye na-ejere Mefiboshet+ ozi bịara izute ya, ọ kpụkwa ịnyịnya ibu+ abụọ e dokwasịrị ihe e ji anọkwasị ha, ha bu narị ogbe achịcha abụọ+ na otu narị achịcha mkpụrụ vaịn a mịrị amị+ na otu narị mkpụrụ osisi na-amị n’oge okpomọkụ+ nakwa nnukwu ite mmanya.+ 2 Eze wee jụọ Zaịba, sị: “Gịnị ka ihe ndị a i bu pụtara?”+ Zaịba wee zaa, sị: “Ịnyịnya ibu ndị a bụ nke ezinụlọ eze ga na-agba, achịcha ndị a na mkpụrụ osisi ndị a na-amị n’oge okpomọkụ bụ nke ụmụ okorobịa+ ga-eri, mmanya a bụ nke onye ike gwụrụ+ n’ala ịkpa.”+ 3 Eze wee jụọ, sị: “Olee ebe nwa nna gị ukwu nọ?”+ Zaịba wee zaa eze, sị: “Ọ nọ na Jeruselem; n’ihi na ọ sịrị, ‘Taa, ụlọ Izrel ga-enyeghachi m ọchịchị nna m.’”+ 4 Eze wee sị Zaịba: “Lee! Ihe niile bụ́ nke Mefiboshet bụzi nke gị.”+ Zaịba wee sị: “Ana m akpọrọ gị isiala.+ Ka ihe m dị gị mma, onyenwe m eze.” 5 Eze Devid wee bịaruo Bahurim,+ ma, lee! otu nwoke nke si n’ezinụlọ Sọl, aha ya bụ Shimiaị,+ nwa Gira, si n’ebe ahụ na-apụta, na-akpọ ya iyi ka ọ na-apụta.+ 6 O wee malite ịtụ Devid na ndị niile na-ejere Eze Devid ozi nkume; mmadụ niile na ndị dike niile nọkwa ya n’aka nri na n’aka ekpe. 7 Nke a bụ ihe Shimiaị kwuru mgbe ọ na-akpọ ya iyi: “Pụọ ebe a, pụọ ebe a, gị nwoke ikpe ọbara mara+ na onye na-abaghị n’ihe!+ 8 Jehova akwụwo gị ụgwọ ọbara dum nke ụlọ Sọl ị wụfuru, bụ́ onye ị na-achị dị ka eze n’ọnọdụ ya; Jehova na-enyekwa ọbụbụeze a n’aka nwa gị Absalọm. Lee, ọdachi adakwasịla gị, n’ihi na ị bụ nwoke ikpe ọbara mara!”+ 9 N’ikpeazụ, Abishaị nwa Zeruya+ sịrị eze: “Gịnị mere nkịta a nwụrụ anwụ+ ga-eji na-akpọ onyenwe m eze iyi?+ Biko, ka m gaa gbupụ ya isi.”+ 10 Ma eze sịrị: “Gịnị jikọrọ mụ na unu,+ ụmụ Zeruya?+ Ya kpọwa m iyi,+ n’ihi na Jehova asịwo ya,+ ‘Kpọọ Devid iyi!’ Ònyezi ga-asị, ‘Gịnị mere i ji mee otú ahụ?’”+ 11 Devid wee gaa n’ihu ịgwa Abishaị na ndị niile na-ejere ya ozi, sị: “Lee, nwa m, onye si n’ahụ́ m pụta, na-achọ mkpụrụ obi m;+ ma ya fọdụzie onye ebo Benjamin!+ Hapụnụ ya ka ọ kpọwa m iyi, n’ihi na Jehova agwawo ya ka o mee otú ahụ! 12 Ma eleghị anya, Jehova ga-eji anya ya hụrụ,+ Jehova ga-enyeghachi m ihe ọma kama nkọcha ọ kọchara m taa.”+ 13 Devid na ndị ikom ya wee na-aga n’okporo ụzọ ahụ, ma Shimiaị nọ na-aga n’akụkụ ugwu ahụ, na-aga n’akụkụ ya ka o wee na-akpọ ya iyi;+ ọ nọkwa na-atụ ya nkume ka ọ na-aga n’akụkụ ya, ọ bọkwara ya ájá nke ukwuu.+ 14 N’ikpeazụ, eze na ndị niile ya na ha so bịarutere, ike gwụsịkwara ha. Ha wee tụrụ ndụ n’ebe ahụ.+ 15 Ma Absalọm na mmadụ niile, bụ́ ndị ikom Izrel, banyere Jeruselem;+ Ahitofel+ sokwa ya. 16 O wee ruo na, ngwa ngwa Hushaị+ onye Akaịt, bụ́ enyi+ Devid, bịakwutere Absalọm, Hushaị sịrị Absalọm: “Eze, ị ga-adị ndụ!+ Eze, ị ga-adị ndụ!” 17 Absalọm wee jụọ Hushaị, sị: “Ọ̀ bụ ihe a bụ obiọma* ị na-egosi enyi gị? Gịnị mere i soghị enyi gị gawa?”+ 18 Hushaị wee zaa, Absalọm, sị: “Ee e; kama onye Jehova na ìgwè mmadụ a nakwa ndị ikom niile nke Izrel họọrọ, nke ya ka m ga-abụ, m ga-esokwa ya nọrọ. 19 Ka m kwuokwa ya ọzọ, Ònye ka m ga-ejere ozi? Ọ́ bụghị nwa ya? Dị nnọọ ka m jere ozi n’ihu nna gị, otú ahụ ka m ga-eme n’ihu gị.”+ 20 E mesịa, Absalọm sịrị Ahitofel: “Nyenụ m ndụmọdụ.+ Gịnị ka anyị ga-eme?” 21 Ahitofel wee sị Absalọm: “Dinaa ndị iko nna gị,+ bụ́ ndị ọ hapụrụ ka ha lekọtawa ụlọ.+ Izrel dum ga-anụkwa na i mewo onwe gị ka ị na-esi ísì ọjọọ+ n’ebe nna gị nọ,+ aka+ ndị niile dịnyeere gị ga-adịkwa ike.” 22 Ha wee maara Absalọm ụlọikwuu n’elu ụlọ.+ Absalọm wee malite idina ndị iko nna ya+ n’ihu Izrel dum.+ 23 Ndụmọdụ Ahitofel, bụ́ ndị o nyere n’ụbọchị ndị ahụ, na-adị nnọọ ka mgbe mmadụ jụtara ihe ezi Chineke kwuru. Ọ bụ otú ahụ ka ndụmọdụ+ Ahitofel+ na-adị Devid na Absalọm.